Guutuu Addunyaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee vaayirasii koroonaa irraa bayyanatanii miiliyoona tokko ol (1,031,803) gahe. - NuuralHudaa
Guutuu Addunyaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee vaayirasii koroonaa irraa bayyanatanii miiliyoona tokko ol (1,031,803) gahe.
Guutuu Addunyaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee vaayirasii koroonaa irraa bayyanatanii miiliyoona tokko ol (1,031,803) gahe. Lakkoofsi namoota du’anii ammoo 231,577 dabruu gabaafame. Haaluma walfakkaatuun lakkoofsi namoota vayirasichaan qabamuun mirkanaahee ammas saffisaan dabalaa jira.
Weerara Vaayirasii koroonaatiin walqabatee odeeyfannoowwan ijoon guyyaa har’aa, Khamiisa, April 30, 2020, kanneen armaan gadiiti.
18:07GMT-Muummichi ministeera Britiiniyaa Boris Johnson dhibee vaayirasii koroonaa irraa eega fayyee booda har’a ibsa kenneen, Weerarri Vaayirasichaa biyyattii keessatti sadarkaa hamaa bira dabruu beeksise. Haata’u malee sa’aa 24 dabre keessatti qofa namni 674 sababa vayirasii koroonaatiin kan du’e yoo tahu, walumaagalatti lakkoofsi lammiilee biyyattii vaayirasichaan du’anii 26,711 gahuu ibsame.
16:59GMT-Muummichi Ministeera Raashiyaa Mikhail Mishustin Vaayirasii koroonaatiin qabamuu beeksise. Haaluma kanaan Prezdaant Vilaadmiir Putiin itti aanaa muummicha ministeera bakka buusuu gabaafame.
16:09GMT-Ministeerri Fayyaa Turkiyaa namoota 120,204 vaayirasii koroonaatiin qabamuun mirkanaahe jidduu 3,174 du’uu beeksise.
15:44GMT-WHO’n biyyoota Awrooppaa keessaa walakkaan weerara vaayirasii koroonaa to’achuuf uggura sochii ummataa irra kaahanii turan laaffisaa jiraatuu beeksise. Amalli vayirasichaa rakkisaa waan taheef, biyyoonni kunniin ammas akka of hin daganne jechuun akeekkachiise.
12:50GMT-Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa Vayirasiin Koroonaa biyyoota Lixa Afrikaa keessatti too’annoon ala bahuun sadarkaa hawaasa keessa tamsa’uu irra gahee jira jechuun akeekkachise. Hanga guyyaa har’aatti Vayirasichi biyyoota Afrikaa Saharaa Gadi jiran keessaatti namoota 28,300 ol tahan irratti argamuu gabaafame.
12:00GMT-Jarman Masaajidoota dabalatee manneen amantaa banuuf haal duree mijeessaa jiraatuu ibsame.
11:00GMT-Ministeerri Fayyaa Iiraan lakkoofsi lammiilee biyyatti sababa Vaayirasii koroonaa du’anii 6,000 dabruu beeksise.
10:50GMT-Taajaakistaan yeroo jalqabatiif lammiileen isii 15 Vayirasii koroonaatiin qabamuu gabaaste. Biyyiti jiddu galeessa Eeshiyaa keessatti argamtu tun biyyoota addunyaa muraasa hanga ammaatti vayirasichi gara biyya isaanii galuu hin gabaasin jidduu tokko turte. Haaluma wal fakkaatuun iddoolli Ardii Afrikaa Komoros guyyaa har’aa namni jalqabaa vayirasichaan qabame biyyattii keessatti argamuu beeksiste.
07:00GMT-Yaman keessatti namoota jaha Vaayirasii koroonaatiin qabamuu mirkanaahe jidduu lama du’uu gabaafame.
usmaan nur says:
September 28, 2021 sa;aa 5:19 am Update tahe